mairie-antananarivo – CUA – Mpamonjy voina Tsaralalana: Nahazo fanomezana fitaovana avy amin’ny malala-tànana
CUA – Mpamonjy voina Tsaralalana: Nahazo fanomezana fitaovana avy amin’ny malala-tànana
Notoloran’ny fianakaviana RALAMBOMAHAY RAMAROSATA, izay mpiara-miasa amin’ireo mpamonjy voina avy any amin’ny Mont de Marsan Bordeaux Frantsa, akanjo mafana 133 sy « combinaison anti-flamme et eau » 32 ny Mpamonjy Voina avy an’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA) ny alakamisy teo.
Tonga nandray izany fanomezana izany tamin’ny fomba ofisialy teny amin’ny ivotoeran’ny Sampana Mpamonjy Voina teny Tsaralalàna ny solontenan-dRamatoa Ben’ny Tanànan’Antananarivo Renivohitra, ny lefitra voalohan’ny ben’ny tanàna, kolonely Emilien Ramboasalama sy ny lehiben’ny Kaomandin’ny Mpamonjy Voina.
Nosafidiana manokana ny Kaominina Antananarivo Renivohitra hoy ny mpanome tamin’ity voalohany ity amin’ny maha Renivohitr’i Madagasikara azy. Etsy andaniny dia nanambara ny Sampana Mpamonjy Voina fa hery sy ampinga ho azy ireo ny fahazoana izao fitaovana vaovao izao amin’ny fanatanterahana ny andraikiny, koa nanome toky izy ireo fa hiezaka hanatsara hatrany ny kalitaon’ny asa famonjena voina.
Raha jerena tokoa mantsy dia manana olana amin’ny tsy fahampiana fitaovana ho entina miasa ireto mpamonjy voina ireto, ka nametraka tanjona izy ireo amin’ny fanavaozana izany fitaovana izany. Araka izany dia misokatra amin’ny fiaraha-miasa amin’ny rehetra ny Mpamonjy Voina na avy eto an-toerana izany na ny avy any ivelany. Santatra ambava rano ihany ity ataon’ireto fianakaviana RALAMBOMAHAY sy ny ekipan’ny Mpamonjy voina avy any amin’ny Mont de Marsan Bordeaux ity fa ny manetsa be mbola ho avy.